Looltoonni Biyya Alaa Afgaanistaan Keessaa Ba'u Taaliibaan Gammachisee Jira
Kan Yunaaytid Isteetsiin hogganaman humnootiin biyya alaa Afgaanistaan keessaa ba’u isaanii Taalibaan har’a kan kabaje yoo ta’u kunis weerartootaaf baruumsa ta’a jedhee jira.
Garu Yunaaytid Isteetesii fi hawaasa addunyaa kanneen biroo waliin hariiroo gaarii qabaachuu akka fedhan dubbatan.
Dubbii himaa olaanaan kan Taaliibaan Zaabiullah Mujaahid dirree xayyaarri lafa xayyaarri irraa furguggifamuu irratti oduu gabaastotaaf akka ibsanti, humnootiin Amerikaan hogganaman ba’uun injiifannoo hunda keenyaa waan ta’eef Afgaanistaan baga gammaddee jedhan.Garu Taaliibaan attamiin biyyatti bulchuuf akka jiru yaada xiqqoo kennan.
Garee humnootii Baadrii jedhamaniin kan marfamanii ibsa kennaa turan dubbii himaan olaanaan kan Taalibaan kun, lammiwwan Afgaanistaan gar malee hin sodaachisinaa jechuun humnoota achii turanti dubbatan.
Uummata Afgaanistaan haala naamusaa fi haala gaariin keessummeessaa, Uummanni argachuu kan qabuus kana ittiin jedhan.Kana malees isiin tajaajiiltoota uummataa ta’u keessan yaadachuun, uummata keessan irratti human jabaa hin gargaaramiinaa jedhanii jiran.